Basanta Basnet: लोकतन्त्रको ह्याप्पी बर्थ डे
एमाले नेता घनश्याम भूसाल गम्भीर सैद्धान्तिक अध्ययन र विश्लेषणका लागि चर्चित छन्। एमालेमा उनले पारित गराउन नसकेको नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण एमाओवादीको हेटौडा अधिवेशनले पारित गरेको गाइँगुइँ सुनिन्छ। कार्कीसँगै उभिएका उनी भन्दैथिए, 'कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा अलि वैचारिक छलफल चलाउन खोज्यो भने बढ्ता सैद्धान्तिक भएको भनी टिप्पणी गर्ने चलन छ। हामीकहाँ त सिद्धान्तै छैन, त्यो कसरी बढ्ता भयो?'
भूसालले यसो भन्दैगर्दा खचाखत दर्शकदीर्घामा बसिरहेकी एक महिला कमरेड कुरा सुन्न छाडेर छेउछाउका कमरेडहरुलाई श्रीमद्भागवत सप्ताह महापुराणको निमन्त्रणा कार्ड बाँडिरहेकी थिइन्। एमाले नेता मदन भण्डारीमाथि आधारित फिल्म 'दासढुंगा' निर्माण गरेका मनोज पण्डित छेवैमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहेका थिए। पंक्तिकारलाई भूसालको कुरा दोहोर्‍याउन मन लाग्यो, 'सिद्धान्तै छैन, कसरी बढ्ता भयो?'
पोलिटब्युरो सदस्य कार्कीले भने, 'हाम्रो पार्टीमा मौलाएको भ्रष्टाचारको विरोध गर्‍यो भने कमरेडहरु हाँस्न थाल्छन्। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन।'
प्रभावशाली एमाले नेता वामदेव गौतमको गढ मानिने बर्दिया पुगेपछि प्रचण्डलाई अचानक तत्वबोध भयो, 'एमाले भन्ने पार्टी नै छैन।'
खासमा, कांग्रेससँग मिलेर मोर्चा बनाउने एमाले प्रस्तावले प्रचण्डलाई झस्काएको हो। एमालेलाई पनि किन कांग्रेससँग लहसिनु परेको होला? भूसालको जवाफ रोचक थियो, 'मधेसवादी र जातिवादीसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको जग हल्लाउने मोर्चाबन्दी तपार्इंहरुले थाल्नुभयो। हामीलाई राष्ट्र जोगाउनु थियो, त्यसैले कांग्रेससँग मिलेर जान हामी नै हतारिएका हौं।'
Nagarik, Collage, 2070 Baisakh 11 Wednesday
column : Kura Khasra Mitha
Posted by Basanta Basnet at 11:29 PM